Sidee buu ku horumari karaa ganacsiga soomaalida Göteborg? [MAQAAL] | Somaliska
Soomaalida inta la og yahay waxeey dalkaan iyo magaaladan soo galeen wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeye ee dalka ka qarxay. Waxeey soomaalida dalkaan guud ahaan ku qaadatay ineey si rasmi ah ula jaan qaadaan muddo ka badan labaatan sanno. Saas oo ay tahayna waxaa jira dhinacyo badan oo horumar iyo dib u dhac ah.
Hase ahaatee maqaalkeenan maanta waxaan ku eegeeynaa sida ganacsiga dhinacyada badan leh ee soomaalida Göteborg u shaqeeyo taas oo leh ammaaanteed iyo dhaleeceeynteed. Magaaladda Göteborg, waxaa ku yaala tobbaneeyo ganacsi oo dhamaantood u badan dukaaman lugu iibiyo dharka iyo waxyaabaha kale ee dumarka isku qurxiyaan. Marka aan dhinaca wanaagsan ka eeggno waxaan oran karnaa waa guul iyo horumar ku soo kordhay soomaalida magaaladda oo waligoodba ka duwanaa ajaanibta kale.
Hase ahaatee dhaliilaha ay dukaamanka leeyihiin ayaa ah inaanu u kala soocneyn badeecadaha ay iibinayaan, Tusaale ahaan: In dukaanku ahaado mid ay wixiisa u kala soocan yihiin sida mid dharka qura lugu iibiyo, ama cuntada lugu iibiyo. Balse waxaa arkeeysa dukaan lugu dhex iibinayo dhar iyo cunto, taas oo dad badan is weydiineeysa halka ay iska qaban la’yihiin , waana mid aan wanaagsaneyn islamarkaasina oo dhaawaceeysa sumcadda soomaalida.
Waa mid ka mid ah meheradaha soomaalida Iswiidhan, saas oo ay tahayna waxaa isku lamaanan dukaan iyo meel kafee-ga lugu qabo: Muuqaalkan shaqo kuma laha maqaalka.
Waxaa dhawaan magaaladda ku soo biiray maqaayado soomaali ah, inkastoo aad dareemeeyso in ay yihiin kuwo lugu saleeyey oo kaliya macaamisha soomaalida oo qura, hadana kolka aad soo gasho waxaa muuqata ineeysan laheyn hanaankii soo jiidashadii iyo bilicdii lugu yaqaanay maqaayadaha stander-ka ah, ee ay u muuqaal eg yihiin jikooyinkii guryaha soomalaida. Waxaase tusaale gaaban u soo qaadaneynaa xaaladda is dhex yaac ee ganacsiga soomaalida sawirka idiin muuqda ee ah dukaan cunto lugu iibiyo iyo maqaayad kafeega lugu qabo oo isku dhex taala.
Su,aasha isweydiinta mudan ayaa ah maqaayaduhu ma waxaa loogu talagalay oo keliya soomaalida mise cid kasta oo xiiseeyneysa cuntooyinka soomaalida? Haddii jawaabtu tahay HAA waa mid cid kasta u furan, ma waaney habooneeyn in la quruxyo oo la bilo goobaha ay imanayaan dadka aan soomaalida aheyn ee danjireyaalka ah? DABCAN! Naasiib darrase ma dhicin in ay muudaan bilicda iyo adeega maqaayaduhu leeyihiin.Waana mida keentay in maqaayadaha qaar cidlo yihiin oo su,aalo badan maskaxdaada ku soo dhaceeyso.
Tani waxaan oran karna waa mida keenta in soomaalida qaarkood ay isku maqiiqaan maqaayadaha shisheeye ee u badan carabta iyo turkida kuwaas oo la runsan yahay ineey dhinac kasta kaga wanaagsan yihiin soomaalida. Su,aalaha aan dhamaadka laheyn ee soo laa laabta ayaa waxaa ka mid ah ma waaneey soomaalida aqoon hanaanka maqaayadaha u shaqeeyaan ee ah in goobta laga iibiyo ka sokoow cuntada? Jawaabta akhristeyaasha ayaan u deeynay.
Gunaanadkii maqaalkan gaaban waxaa soomaalida Göteborg ee ganacsiga ku leh magaaladda la gudboon in is badal ku sameeyaan hanaanka ganacsigooda u shaqeeyo si haddii ay doonayaan in helaan macaamil aan ku koobneyn soomaalida oo qura, islamarkaasina u najaxo ganacsigooda. Iyadoo tani qeyb ka tahay isdhexgalka bulsho ee dadyowga ay la nool yihiin misna kor u qaadi karta magaca bahdilan ee soomaalida Iswiidhan gaar ahaan Göteborg.
Arbetsförmedlingen oo shaqaalaynaya ajaanibta si ay u qabtaan shaqadii hagayaasha
July 31, 2017 at 05:16
Qoraaga qoray maqaakan wuxuu qoray isku day wanaagsan, hase ahaatee waxaan ra’yi ahaan soo jeedin lahaa in uu iska saxo qaabka qoraalka tusaale ahaan ( maqaayadaha kafeega lagu qabo) iyo waxyaabo kalay oo aan arkay.